Guddoomiyaha Gobolka Sh.Dhexe Oo Kormeero Kale Duwan Ku Tagay Degmooyin Ka Tirsan gobolka Sh.Dhexe – Radio Muqdisho
Guddoomiyaha Gobolka Sh.Dhexe Oo Kormeero Kale Duwan Ku Tagay Degmooyin Ka Tirsan gobolka Sh.Dhexe
Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Dhexe Cali C/llaahi Xuseen Guudlaawe ayaa kormeero ku tagay degmooyin ka tirsan Gobolkaasi, isagoo u kuur galayay xaaladaha ammaan, iyo howlaha mashaariic ee la hirgelinayo.
Guddoomiye Guudlaawe oo ay wehliyaan xubno ka tirsan maamulka gobolka ayaa shalay kormeeray degmada xeebta ku taal ee Warsheekh, halkaaasi oo uu kula kulmay waxgaradka, qeybaha bulshada iyo haweenka, isagoo kala hadlay arrimaha amniga iyo howlaha mashaariicda ee laga fulinayo degmadaas.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in degmada Warsheekh ay ka mid tahay degmooyinka uu ka socdo howlaha mashaariicda ee ay fulineyso dowladda Soomaaliya, waxaana uu dhagax dhigay howlo mashaariic oo isugu jira iskuulo, xarumo caafimaad iyo ceelal laga hirgelinayo degmadaas, si dadka ay u helaan biyo nadiif ah.
Waxaa uu sheegay inuu soo hagaagayo ammaanka wadada isku xirta Muqdisho iyo Warsheekh, halkaasi oo horey loogaga cabanayay, waxaana uu tilmaamay in ciidamada amniga ay ka hortageen kooxo jidka u gala gaadiidka safarka ah, kuwaasi oo dhac iyo baad ka qaata.
Sidoo kale waxaa uu xusay in dhowaan la dhisi doono saldhigii booliska iyo goobaha kale ee aas aasiga u ah bulshada, waxaana uu balan qaaday in maamulkiisa uu sii wadi doono howlaha mashaariicda ee lagu horumarinayo degmada.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kale booqday degmada Balcad, waxaana uu halkaas kula kulmay maamulka degmada, odayaasha deegaanka iyo ururada bulshada, waxaana uu kala hadlay arrimo ay ka mid tahay amniga iyo horumarinta deegaanka.
Gudoomiyaha gobolka Shabeelaha dhexe Cali Guudlaawe ayaa dib ugu laabtay magaalada Jowhar ee xarunta Gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaasoo si diiran loogu soo dhoweeyay, waxaana beryahan Gudoomiyaha uu waday howlo uu ku kormeerayo deegaanada gobolka.
Si kasto ha ahaatee Maamulka Gobolka Shabelaha Dhexe ayaa wada qorshayaal lagu horumarinayo degmooyinka Gobolka, si looga hirgelinyo mashaariicyo isugu jira adeegyada bulshada aas aasiga u ah sida waxbarashada, caafimaadka iyo arrimo kale.
Kooxaha Chelsea,Man City,Arsenal,Man United,Liverpool iyo Tottenham oo Guulo Gaaray “Sawirro”